ISISTIMU NEMEMORI ECINDEZELWE UKUSETSHENZISWA KWEDISKI EPHEZULU KUMAWINDI 10 - AMANANI
Abasebenzisi beWindows babika ngemuva kokuthi uhlelo lwamuva lwamawindows 10 Thuthukisa lungasabeli ekuqaleni futhi Ukusetshenziswa Kwediski Okungu-100% ngoSistimu Nememori Elicindezelwe. Uma ubhekene nenkinga efanayo qhubeka nokufunda lokhu okuthunyelwe sinezixazululo eziphumelela kakhulu ukulungisa ifayela le- uhlelo nokusetshenziswa kwenkumbulo okuphezulu kwe-CPU , ntoskrnl.exe noma uhlelo nenkumbulo ecindezelwe ukusetshenziswa kwediski ephezulu noma inkinga yokusetshenziswa kwememori eyi-100% kumawindi 10. Ngaphambi kokufaka izixazululo ake uqale uqonde Luyini uhlelo nenkumbulo ecindezelweyo (ntoskrnl.exe) Futhi kungani isetshenziswa i-100% Disk noma i-CPU?
Okuqukethwe umbukiso 1 Luthini uhlelo nenkumbulo ecindezelweyo? ezimbili Isistimu ne-compressed memory CPU ephezulu 2.1 Setha usayizi wefayela we-paging wawo wonke amadrayivu abuyele kokuzenzakalelayo 2.2 Setha Imvume Efanele Yohlelo Nenqubo Yokucindezelwa Kwememori 2.3 Khubaza isistimu nememori ecindezelwe 2.4 Khubaza i-Superfetch Service 2.5 Lungisa i-PC yakho ukuze isebenze kahle kakhulu 2.6 Ezinye Izixazululo Zokufaka isicelo
Luthini uhlelo nenkumbulo ecindezelweyo?
Isistimu nememori ecindezelwe iyi Insiza yeWindows lokho ikakhulu kubhekele ukucindezela izinhlobo ezahlukahlukene zamafayela namafolda kanye nokuphathwa kwanoma iyiphi i-RAM etholakalayo. Lokhu kusiza ukuphatha ukucindezelwa nokukhishwa kokusebenzisa kwakho okuncane kanye nokushayela okudala namafayela, okwenza kube lula ukugcina futhi kusheshe ukusetshenziswa lapho uwadinga. Futhi ilawula futhi iqaphe imisebenzi ehlukahlukene ehlobene nesistimu kanye nemisebenzi ehambisana nememori yokufinyelela okungahleliwe.
Ngokuyinhloko, lokhu uhlelo nememori ecindezelwe inqubo kufanele ithathe isikhala esincane kakhulu kudiski naku-CPU. Kodwa-ke, kwesinye isikhathi ngenxa yanoma yisiphi isizathu inqubo ingaqala ukusebenzisa cishe Ukusetshenziswa kwe-100% Disk ne-CPU Futhi iWindows ayisebenziseki, abasebenzisi abakwazi ukwenza noma yimuphi umsebenzi kukhompyutha yabo.
Isistimu ne-compressed memory CPU ephezulu
I- Inqubo yesistimu nenqubo ecindezelwe yokusetshenziswa kwediski ephezulu inkinga iqala ikakhulu izizathu ezimbili. Kwangathi ungadideka ngezilungiselelo zakho zememori ebonakalayo futhi wagcina ngokushintsha usayizi wefayela we-paging kusuka ku-Automatic kuye kunani elibekiwe noma i-System kanye nenqubo yememori ecindezelwe kumane nje kuhambe haywire. Amanye amafayela angama-windows angonakala, iSistimu itheleleke nge-malware yegciwane noma yiluphi uhlelo lokusebenza lomuntu wesithathu oludala inkinga nokunye.Noma ngabe siyini isizathu sale nkinga lapha ezinye izixazululo ezisebenza kahle kakhulu ukulungisa i-ntoskrnl.exe noma isistimu nokusetshenziswa komemori okuphezulu kwe-CPU, Ukusetshenziswa kwediski okungu-100% njll.
isango elizenzakalelayo alitholakali windows 10 lungisa
Qala ngokwenza okuyisisekelo ukuskena okugcwele kwesistimu ngokuvuselelwa kwakamuva uhlelo lokusebenza lwe-antivirus . Ukuqinisekisa noma yikuphi ukutheleleka ngegciwane / kwe-malware okungabangeli i-100% CPU, inkinga yokusetshenziswa kweDiski.
Gijima isistimu yokuhlola ifayela Futhi Umyalo we-DISM ukwenza isiqiniseko sokuthi noma yimaphi amafayela esistimu okhohlakele, Amafayela wesistimu Alahlekile angabangeli inkinga. Iyagijima Ukusetshenziswa kwe-SFC hlola amafayela wesistimu alahlekile uma kutholakala noma yikuphi ukusetshenziswa okuwabuyisela kusuka kufolda ecindezelwe etholakala ku- % WinDir% System32 dllcache . Futhi uma i-SFC yehluleka ukulungisa amafayela wohlelo owonakele Qalisa umyalo we-DISM elungisa isithombe sesistimu futhi inike amandla i-SFC ukwenza umsebenzi wayo. Ngemuva kokwenza lezi zenzo Qala kabusha amawindi wakho bese uhlola inkinga ixazululiwe.
Setha usayizi wefayela we-paging wawo wonke amadrayivu abuyele kokuzenzakalelayo
Ngokuzenzakalelayo, iWindows izosetha usayizi wefayela le-pagefile.sys iphinde iliphathe ngokuzenzekelayo. Uma usanda lungisa imemori ebonakalayo bese usetha ngokwezifiso usayizi wefayela we-paging kunoma iyiphi idrayivu yakho, Lokhu kungaholela ezinkingeni zokucindezelwa kwememori ku Windows 10, ekugcineni kuholele ekusetshenzisweni kwediski okungu-100% ngoHlelo nenqubo yememori ecindezelweyo. Futhi ukuyibuyisela esimweni esizenzakalelayo kuzokusiza ukuxazulula le nkinga.
Chofoza ku-windows 10 qala ukusesha kwemenyu bese uthayipha ukusebenza. Manje Chofoza kumphumela wosesho oqanjwe igama Lungisa ukubukeka nokusebenza ye-Windows.
amawindi wokutakula iphasiwedi mahhala 10
Lokhu kuzovula okuzivelelayo kokukhethwa kokusebenza lapha kuqhubekele kokukhethwa kukho okuthuthukile -> chofoza kuguquko ngaphansi kwememori ebonakalayo. Manje Ewindini leMemori Elibonakalayo, hlola “ Phatha ngokuzenzakalela usayizi wefayela lokulayisha kuwo wonke amadrayivu ”Ibhokisi. Chofoza KULUNGILE. Chofoza ku-Sebenzisa bese ulungile ku-window yezinketho zokusebenza. Lokhu kuzocela ukuqala kabusha windows ukuze kusebenze izinguquko ozenzile. Mane uqale kabusha amawindi bese uhlola inkinga ilungisiwe.
Setha Imvume Efanele Yohlelo Nenqubo Yokucindezelwa Kwememori
Uma ikhambi lokuqala lingakusebenzeli kahle. Ungakhathazeki! Ungamane uzame isixazululo sesibili ukusithola uhlelo nenkumbulo ecindezelwe ukusetshenziswa kwediski ephezulu inkinga.
Cindezela ukhiye weWindows + nohlobo S Taskschd.msc bese ushaya u-Enter ukuvula iSihleli Semisebenzi.
Bese uye kuMtapo Wezincwadi Wokuhlela Umsebenzi> Microsoft> Windows> MemoryDiagnostic.
Qhafaza kabili ku-ProcessMemoryDiagnostic Events bese uqhafaza Shintsha Umsebenzisi noma Iqembu ngaphansi Kokukhethwa Kwezokuphepha.
Lapha Chofoza Okuthuthukile bese uchofoza okuthi Thola Manje.
Skrolela phansi bese ukhetha i-akhawunti yakho yomsebenzisi ohlwini bese uqhafaza KULUNGILE.
Umaki wokuhlola Gijimisa ngamalungelo aphakeme kakhulu bese uqhafaza KULUNGILE.
Yenza izinyathelo ezifanayo ze- I-RunFullMemoryDiagnostic bese uvala konke.
Qalisa kabusha i-PC yakho ukuze wenze ushintsho.
Ngemuva kwalokho hlola ukuthi iWindows isebenza ngokujwayelekile ngaphandle kwe-CPU ephezulu, ukusetshenziswa kweDiski.
Khubaza isistimu nememori ecindezelwe
Uma ukusebenzisa zombili izixazululo kungasebenzi namanje i-100% CPU noma ukusetshenziswa kweDiski ngohlelo nememori ecindezelwe Ungakhathazeki! Lapha isixazululo esisebenza kunazo zonke ngokuphelele Khubaza isistimu nememori ecindezelwe inqubo.
Chofoza kuhlobo Lokuqala lokusesha imenyu Isihleli Somsebenzi bese ushaya ukhiye wokungena.
Lapha kusiSebenzi Semisebenzi, chofoza kabili kuLabhulali Yeshejuli Yomsebenzi kufasitelana lesokunxele ukuze unwebe okuqukethwe kwayo.
Qhafaza kabili ku IMicrosoft kufasitelana lesobunxele ukunweba okuqukethwe kwalo.
Okulandelayo Qhafaza kabili ku Amawindi kufasitelana lesobunxele ukunweba okuqukethwe kwalo.
Skrolela phansi bese uchofoza ku I-MemoryDiagnostic kufasitelana lesokunxele ukuze okuqukethwe kwalo kuboniswe kufasitelana langakwesokudla.
thola bese uqhafaza kwesokudla emsebenzini obizwa nge-RunFullMemoryDiagnosticEntry bese uchofoza ku-Khubaza kumenyu yokuqukethwe.
Lokho konke Vala iSihleli Semisebenzi bese uqala kabusha ikhompyutha yakho.
Bheka ukuthi inkinga iyaqhubeka yini uma ikhompyutha yakho ivulekile.
Khubaza i-Superfetch Service
Kwesinye isikhathi ezinye izinsizakalo zewindows (ikakhulukazi i-Superfetch, ne-BITS service) ezisebenza ngemuva zingadala izingqinamba ezahlukahlukene, Ukusetshenziswa kwezinsizakusebenza ezingadingekile ezibangela inkinga yokusetshenziswa kwezinsizakusebenza eziphezulu kumawindi 10. Sincoma ukukhubaza insiza yeSuperfetch ngokulandela izinyathelo ezingezansi bese uyayihlola isiza ukulungisa inkinga yokusetshenziswa kwediski engu-100%.
windows 10 setha kabusha windows buyekeza
Cindezela iWindows + R, thayipha amasevisi.msc, bese ushaya ukhiye wokungena. Bheka insiza eqanjwe sbabaze bese uqhafaza kabili kuyo ukuvula izakhiwo zayo. Lapha shintsha uhlobo lokuqalisa khubaza futhi umise insizakalo eduze kwesimo sesevisi njengoba kuboniswe isithombe ngezansi. qhafaza apply futhi ok ukusindisa izinguquko, Qala kabusha amawindi ukuze wenze ushintsho. Ekuhloleni kokuqala okulandelayo, azisekho izinkinga zokusebenzisa iDiski eziyi-100%.
Lungisa i-PC yakho ukuze isebenze kahle kakhulu
Lesi ngesinye isixazululo esisebenzayo sokunciphisa ukusetshenziswa kweMemori ephezulu, iDiski noma ye-CPU kumawindows 10.
Mane ucindezele iWindows Key + R bese uthayipha sysdm.cpl bese ushaya u-Enter ukuvula Izakhiwo Zesistimu.
Shintshela kuthebhu ethuthukisiwe bese uqhafaza kuzilungiselelo ngaphansi kokusebenza.
Manje Ngaphansi kwethebhu yemiphumela yokubonakalayo khetha inkinobho yomsakazo ethi 'Lungisa ukuze usebenze kahle kakhulu'. Chofoza Faka isicelo kulandelwe OK.
Qalisa kabusha i-PC yakho bese uhlola ukuthi akusekho okunye Kunokusetshenziswa Kwediski okungu-100% ngoSistimu Nememori Elicindezelwe.
isibani sasebusuku asisebenzi kumawindi 10
Ezinye Izixazululo Zokufaka isicelo
Khubaza ukuqalisa okusheshayo: Vula Iphaneli Yokulawula -> Zonke Izinto ZePhaneli Yokulawula -> Izinketho Zamandla. Ngemuva kwalokho kusuka kufasitelana lewindi lesobunxele khetha Khetha ukuthi izinkinobho zamandla zenzani. Manje chofoza ku “ Shintsha izilungiselelo ezingatholakali okwamanje. 'Futhi ungahloli' Vula ukuqala okusheshayo ”Bese uchofoza ku-Gcina izinguquko.
I-Tweak Google Chrome ne-Skype: Ku-Google Chrome Zulazulela ku Amasethingi> Khombisa Amasethingi Athuthukile> Ubumfihlo> Sebenzisa insiza yokubikezela ukulayisha amakhasi ngokushesha okukhulu . Khubaza ukuguquguqula okuseduze kokuthi “Sebenzisa insiza yokubikezela ukulayisha amakhasi.”
Okwe-Skype (qiniseka ukuthi usuphumile kuhlelo lokusebenza lwe-skype) uye ku C: Program Files (x86) Skype Ifoni Qhafaza kwesokudla I-Skype.exe bese ukhetha Izici. Shintshela kufayela le- Ithebhu yezokuphepha bese uqhafaza Hlela. Khetha WONKE AMAPHakheji WOKUFAKA ISICELO ngaphansi kwegama leqembu noma lomsebenzisi bese umaka Bhala ngaphansi Vumela.
Lezi ezinye zezixazululo ezisebenza kakhulu okufanele uzilungise i-ntoskrnl.exe noma isistimu kanye nememori ecindezelwe ukusetshenziswa kwediski ephezulu , Ukusetshenziswa kwediski okungu-100% noma ukusetshenziswa kwememori ku-Windows 10 PC. Futhi ngiyaqiniseka ukuthi ukusebenzisa izixazululo ezingenhla kuzoxazulula le nkinga ngo-100%. Noma kunjalo unemibuzo maqondana nalokhu okuthunyelwe zizwe ukhululekile ukuxoxa ngakho kumazwana angezansi. Futhi, Funda Windows 10 Ukugijima kuhamba kancane? Nakhu ukuthi ungawenza kanjani windows 10 agijime ngokushesha.
Izindlela ezi-7 zokulungisa Windows 10 isikrini esimnyama ngesikhombisi ngemuva kokungena ngemvume
Lungisa: Windows 10 Ukusetshenziswa kwe-Runtime Broker High CPU, ukusetshenziswa kweDiski okungu-100%
I-Fix windows store ngeke ivule ikhodi yephutha 0x80070422 ku Windows 10
Ungayisusa kanjani i-windows 10 watermark ngaphandle kokhiye womkhiqizo
windows 10 izinhlelo zokusebenza ezingavulwa
windows 10 ikhodi yokumisa irql hhayi ngaphansi noma elinganayo
sebenzisa i-usb drive njengenqama
Uhlelo lokusebenza lwe-netflix windows 10 alusebenzi
uhlelo nenkumbulo ecindezelwe ukusetshenziswa okuphezulu
ilaptop iqhubeka nokunqamula kumawindi e-wifi 10